Sambava Rongony 20 kilao indray no tratra
Jiolahy roalahy no saron` ny mpitandro filaminana nitondra rongony milanja 20 kilao izay nentina avy any amin'ny Kaominina Doany,
Faritra mena i 67 ha Zazalahy roa indray no voaendaka rojo volafotsy
Tovolahy iray, 18 taona no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny CSP7 ny sabotsy teo teny amin’ny Bonarabe 67 ha .
Tambajotran-jiolahy ikoizana Sarona niaraka tamin’ny rongony sy basy ary bala
Tratra nandritra ny hetsika nataon'ny Tobim-paritry ny zandarimaria Imerintsiatosika ny tambazotran-jiolahy iray ahitàna jiolahy ikoizana miisa folo (10) ao amin'ny kaominina Imerintsiatosika, ny 17 oktobra 2020.
Halatra sy vaky trano Lehilahy 4 no voasambotra teny amin’ny 67 ha
Lehilahy miisa efatra no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP7 ny zoma sy sabotsy ary alahady teo teny amin’ny faritra 67ha sy ny manodidina iny.
Voatifitra ka naratra mafy ilay vehivavy, raha araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy. Olona nandeha môtô scooter no voalaza fa nitifitra azy tamin’ny basy poleta ary tsy nisaron-tava. Nentina haingana teny amin’ny hopitaly HJRA Anosy izy. Hatramin’ny omaly hariva fotoana nanoratanay moa dia mbola eo am-pikarakarana azy ireo dokotera ao amin’ny hopitaly HJRA koa andrasana ny mety ho tohiny.Voatoton’ny vodi-basy kosa ilay rangahy vadiny ary voalaza fa nisy mpandalo iray hafa ihany koa voatifitra. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro ny filaminana kosa ny fikarohana ireo nahavanon-doza. Voalaza moa fa lasan’ireo jiolahy ny vola mitentina 100 tapitrisa ariary